Shangri-ला | स्लट Fruity £5+ £ 500 मुफ्त! Shangri-ला | स्लट Fruity £5+ £ 500 मुफ्त!
तपाईं त कल्पनामा र दन्तिये चाहनुहुन्छ भने उनीहरूले फरक संसारमा एउटा यात्रा मा लिन थाहा, शुद्ध कल्पना को संसार. यस्तो यो को आकर्षण छ तपाईं शीर्ष स्लट के जीत राख्न खेल. Shangri-ला बायाँ देखि दायाँ तिर्न कि यसको पाँच रील र पन्ध्र paylines संग खेलिन्छ. खेल ठूलो हिमालय पर्वतहरू तल mythical मुलुकमा को पृष्ठभूमि मा सेट गरिएको छ. यसलाई वरिपरि ठूलो मन्दिर र शान्त नदी बगिरहेको शानदार हेर्न. पृष्ठभूमिमा पुरातन एशियाली मन्दिरमा संगीत मन मा एक निको प्रभाव प्रदान गर्दछ. आफ्नो बाजी राख्न, तपाईं £ 200 हरेक स्पिन को एक अधिकतम गर्न 20p देखि चयन गर्न सक्नुहुन्छ.
Shangri-ला विकासकर्ता बारेमा
यो शानदार र रंगीन तपाईं शीर्ष स्लट के जीत राख्न खेल अर्को उत्प विकास भएको थियो. एक अनलाइन क्यासिनो खेल को संसारको प्रमुख निर्माता को. तिनीहरूले मानिसहरूलाई मनोरंजन रहन मदत र पुरस्कार को भार जीत गरेको स्लट खेल विजेता धेरै पुरस्कार छ.
यो को प्रतीक तपाईं शीर्ष स्लट के जीत राख्न खेल सेतो बाघ छन्, लोटस, गैंडा, हात्ती, तरवार र एक मन्दिर. सेतो बाघ संग शीर्ष तिर्ने प्रतीक हो 500 पटक आफ्नो खम्बा जब आफ्नो तरिका को पाँच देखिन्छ. मुटु, क्लब, कुदाल र कार्ड को हीरा कम्तिमा प्रतीक तिर्ने छन्. तिनीहरूले बहुमूल्य रत्न जस्तो र रील आकर्षक हेर्न बनाउन. यो खेल मा सात बोनस प्रतीक हो, तीन मुख्य खेल र चार बोनस स्तर मा. तिनीहरूले एक तस्वीर फ्रेम मा केटी हो, आगो रोशनी फ्रेम र एक सुन प्रार्थना पाङ्ग्रा अर्को. तिनीहरूलाई विभिन्न ढाँचासँग त्यहाँ चार गोलो आकार प्रतीक र तिनीहरूले बोनस स्तर समयमा मात्र देखा.
जंगली बोनस: तस्विर फ्रेम मा केटी जंगली छ र प्रार्थना पाङ्ग्रा प्रतीक बाहेक सबै खेलाडी. यो केवल रील चार देखिन्छ, तीन र दुई. यसबाहेक, आगो रोशनी फ्रेम मा केटी पनि जंगली रूपमा देखिन्छ. यो तपाईंको विजेता संयोजन बढाउँछ र राम्रो stakes जीत मद्दत गर्छ.
स्क्याटर बोनस: सुन प्रार्थना पाङ्ग्रा यो को स्क्याटर सुविधा छ तपाईं शीर्ष स्लट के जीत राख्न खेल. तीन वा यो प्रतीक अवतरण बढी बोनस स्तर ट्रिगर. त्यहाँ चार सुविधाहरू छन् र तपाईं अंधाधुंध तिनीहरूलाई कुनै पनि एक सम्मानित छन्. तपाईं जीत गर्न सक्नुहुन्छ 8 वा 12 आफ्नो शर्त मा 100x गर्न प्रत्याभूति जंगली landings वा जहाँ तपाईं 15x एक खम्बा जित्न सक्छौं सुविधाहरू spins.
सारांश: विभिन्न बोनस र आश्चर्यजनक ग्राफिक्स संग, यो तपाईं शीर्ष स्लट के जीत राख्न खेल श्रेणी मा सबै भन्दा राम्रो छ. केही भाग्यमानी spins संग, तपाईं सजिलै पुरस्कार को विशाल stakes जित्न सक्छौं.
ब्लेक अप सुट एम
इन्द्रेणी धन फ्री Spins